गुल्मीका यि ६० बर्षका बृद्धले भगाए २५ बर्षिय युवती, यसरी गरे बिहे, गाउँमा हंगामा भिडियो हेर्नुहोस ! – Sanjal Nepal
Homeसमाचारगुल्मीका यि ६० बर्षका बृद्धले भगाए २५ बर्षिय युवती, यसरी गरे बिहे, गाउँमा हंगामा भिडियो हेर्नुहोस !
December 9, 2020 admin समाचार 1650
February 5, 2021 admin समाचार 607
घरमा बिषालु सर्पहरु छन् । बाबु, आमा छर–छिमेक डराउँछन् त्यो कोठामा जान तर एक युवती सबु पाण्डे जान्छिन् । सर्पलाई समाउँछिन् । मुसा, भ्याकुता दिन्छिन्, समाएर नुहाईदिन्छिन पनि ।स्नेक म्यानको रुपमा चिनीएका पाल्पा अर्गेलीका सागर
December 25, 2020 admin समाचार 1787
February 7, 2021 admin समाचार 3500